Ogologo Anyị - Etagtron, Inc.
Etagtron bụ onye na-eweta ihe ngwọta na-agbanwe agbanwe nyere aka na-enyere ndị na-ere ahịa aka ime nke ọma.
Nke anyi Iche
Ọ na-enye ohere nchọpụta dị ogologo nke RF ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịnweta nnyonye anya na mpụga. AM na-ahụkarị obere obere uwe akwa, nnukwu ụlọ ahịa, DIY ụlọ ahịa, ụlọ ahịa elektrọnik, na ndị na-ere ọgwụ ọgwụ ebe ngwaahịa nwere ihe mejupụtara na ngwugwu ha.
RF zuru oke maka ndị na-ere ahịa nwere nnukwu ngwaahịa nke ngwaahịa agbakọtara n'ihi mma nke nrapado, akara ngosi. Nke ahụ na-eme RF sistemụ nhọrọ maka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ego, ndị na-ere ọgwụ na ụlọ ahịa vidiyo. Nke ahụ kwuru, ikike iji kwalite ụfọdụ RF Usoro EAS na RFID pụtara na ojiji ya adịbeghị anya na ụlọ ahịa akwa.
RFID technology automates data collection na nnọọ belata mmadụ mgbalị na njehie.
RFID na-akwado ọtụtụ mkpado RFID na-agụ na-enweghị nyocha ọhụụ ma ọ bụ ihe site na ihe achọrọ, na-enye mmụba na arụmọrụ.
Enwere ike ịchọpụta mkpado RFID niile n'ime oke ozugbo ma dakọtara na ozi dị na nchekwa data gị.
Enwere ike ịgụta akụ na mpaghara edenyere ma dekọọ ya ugbu a, na-efu, ma ọ bụ kwaga ya.
RFID nwere ike itinye aka na nyocha na ndị na-agụ akwụkwọ maka usoro ngwọta na-akpaghị aka.
A dịgasị iche iche nke Jeriko - gụnyere ọtụtụ n'elu ụwa ngalaba ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, na ọgwụ na-echekwa - na-ama na-eji ESL, ndị nwere uru nwere Dynamic Centralized ricnye ọnụahịa, Na-Echekwa Okpomọkụ-Mapping, Akpaghị aka Ndepụta Ngwaahịa Management.
Na-atụ anya ...